सफलताको स्वाद चाख्दै गरेका सरोजको ‘पीडा’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper सफलताको स्वाद चाख्दै गरेका सरोजको ‘पीडा’	सफलताको स्वाद चाख्दै गरेका सरोजको ‘पीडा’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper सफलताको स्वाद चाख्दै गरेका सरोजको ‘पीडा’
सफलताको स्वाद चाख्दै गरेका सरोजको ‘पीडा’
प्रकाशित: १० बैशाख २०७९, शनिबार
काठमाडौं । सरोज कोइराला स्थापित सञ्चारकर्मीका रुपमा आम दर्शक र श्रोतामाझ परिचित छन् । सञ्चारकर्मबाट सांगीतिक धरातलमा छिरेका सरोजले यतिबेला सांगीतिक क्षेत्रमा पनि सफलताको स्वाद चाखिरहेका छन् । दुइ दर्जन बढी गीत गाइसकेका छन् । उनले गाएका तथा संगीत भरेका गीतहरुले सोचेजस्तो भ्युज मिट नगरेतापनि उनको कामको प्रशंसा भने हरेक कोणबाट हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय उत्कृष्ट गायकको रुपमा उनले प्राप्त गरेका विभिन्न अवार्ड र सम्मानले पनि उनी प्रशंसनिय गायक हुन् भन्ने प्रमाणीत गरेको छ । त्यस्तै जब उनका गीतहरु सार्वजनिक हुन्छन् कमेन्टमा पनि उनको स्वरको मनग्गे प्रसंसा गरिएको पाइन्छ ।
स्थापित सञ्चारकर्मी रहेका सरोज पछिल्लो समय संचारकर्म र गीत संगीतलाई सँगसँग अगाडि बढाइरहेका छन् । संगीतमा सक्रिय रहेका उनी हाल उनी प्राइम टाइम्स एचडी र नेपाली रेडियो नेटकवर्कमा कार्यरत छन् ।
सरोजले यसै वर्ष सर्वोत्कृष्ट गायकको युगल गायनका लागि गायिका मेलिना राईसँगै बिन्ध्यबासिनी म्युजिक अवार्ड उचाल्न सफल भए । त्यस्तै नवौं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्ड २०७८ मा उत्कृष्ट गायक घोषित भए । यसैगरि सर्वोत्कृष्ट गायन तथा संगीतका लागि सगरमाथा म्युजिक अवार्ड, नीम अवार्ड लगायतका अवार्डहरु प्राप्त गरेका थिए ।
यतिबेला उनै सरोजको मधुर स्वर र मीठो संगीतले सज्जीत ‘पीडा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सिताराम कोइरालाले लेखेको गीतको भिडियो ओएसआर डिजिटल युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो । राजेन्द्र बजगाईले संगीत संयोजन गरेको गीतको म्युजिक भिडियोमा श्रीदेव भट्टराई र जेबिका कार्कीेले अभिनय गरेका छन् । श्रीदेव र जेबिकाको यो पहिलो सहकार्य भए पनि जोडी जमेको देखिन्छ ।
भिडियोको निर्देशन ऋषि बराल ‘श्रीजन’ ले गरेका हुन् । श्रीमान श्रीमतिको सम्बन्ध, माया प्रेम, छुट्टिनु पर्दाको पीडा र जीवनसाथी विना जीवनको उत्तराद्र्धमा भोग्नुपर्ने दुःखलाई ग्रामीण परिवेशको कथामा श्रीजनले राम्रोसँग उनेका छन् । सन्तोष तिमिल्सिनाले म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन गरेका हुन् ।
सहायक निर्देशन सागर श्रेष्ठले गरेका हुन भने कलाकारको मेकअप कविन खड्काले गरेका हुन् । गीतको प्रोडक्सनको जिम्मेवारी नविन विष्टले पूरा गरेका हुन् ।
‘पीडा’ गीतका विषयमा सरोजले भने ‘आफू संगीतकर्मी माझ गायकको रुपमा पनि चिनिएको छु । हौसला र प्रंशसा पाएको छु । पब्लिकले अझै मलाई सञ्चारकर्मीको रुपमा मात्रै चिनेको महशुष गरेको छु । यो गीतले आगामी दिनमा सञ्चारकर्मी मात्रै नभएर मलाई गायक सरोज कोइराला भनेर चिनाउनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।’
उनको आश र विश्वासले सार्थकता पाओस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना ।
नवौं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डमा सुगम संगीत तर्फबाट उत्कृष्ट गायक विधाको अवार्ड उचाल्दै गायक सरोज कोइराला
बिन्धबासिनी म्यूजिक अवार्डमा सुगम संगीत तर्फबाट युगल गायनबाट ग्रहण गर्दै गायक सरोज कोइराला